Dadweynaha Muqdisho “Marnaba Dowladda kama fileyn in ay noola dhameyso sidaan…”
Wararkii: July 11, 2007
Gudoomiyaha Boondheere oo koox hubeysani dhaawac u gaysatay
Wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar oo laga dayrinayo
“Ciidamada Dowladda way igu jees-jeeseen” waxaa sidaa yiri nin cuuryaan ah oo labada lugood ka go’an.
Iyadoo weli ay socdaan hawlgalada ay Ciidamada Dowladda Federaalka ka wadaan Magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa waxaa dhanka kale cabashooyin xoogani ka soo baxaan dadweynaha suuqaasi ku ganacsatada iyo kuwa u soo wax iibsi taga, waxayna dhamaantoos sheegeen in ay aad uga xun yihiin falal fool xun oo ay sheegeen in ay kula kacaan Ciidamada Dowladda Federaalka. Dadweyhuhu waxay sheegeen in ciidamadu u gaystaan dhac iyo waliba jirdo mararka qaarkood.
Midki ka mid ah dadkii u soo iibsi tagay suuqa weyn oo u waramay wargeyska ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda ay si xun ula dhaqmeen, waxa uuna sheegay in ciidamadu ay jirdilo u gaysteen, isla markaana ay ku qasbeen in uu isaga cararo goobtiisii ganacsi oo furan. Sidoo nin cuuryaan ah oo labada lugood ka go’an ayaa isna sheegay in ciidamad Dowladda Federaalka ay taci xoog leh kula kaceen, waxa uuna ninkaasi isaga oo ilmeynaya sheegay in ay dhowr saacadood hadba meel u jiidayeen. “Runtii waxay iila dhaqmeen sidii aan ajnabi dambiilaa ahay, aniga oo lugaha ka go’an ayay hadba meel ii jiideen oo waliba qaar ka mid ah askarta ayaa igu jees jeestay” ayuu yiri ninkaasi oo lagu magacaabo C/llaahi Diiriye Cadodow isla markaana ay korkiisa ka muuqatay astaamaha in dhulka lagu jiiday, waxaana ninkaasi sidoo kale wajigiisa ka muuqday daqar nabar weyn ah, waxa uuna sheegay in ay u gaysteen ciidamada Doladda Federaalka.
“Dowladda kama fileyn inay sidaan noola dhaqmi doonto, balse waxaan mudo ku taamayey in ay haddii ay dowlad timaado aan ka heli doono daryeel, iyo waliga iyadoo igu dhiiragelinta waxbarashadeyda” ayuu ninkaasi sii raaciyey isagoo aad u ciishoonaa. Ninkaani ayaa ka go’naa labada lugood, isagoo sheegay inay qarax miino uga go’een. Dadweynaha siyaabaha kala duwan u yimaada suuqa Bakaaraha ayaa iyagu si weyn waxa cabasho uga muujinayaan hawlgalada ay Ciidamada Dowladdu ka wadaan suuqa weyn ee bakaaraha, waxaana indhaagu qabanayaan dadweynaha kala cararaya, marka aad weydiisanaya waxa ay ka cararayaan ku sheegay in ciidamada Dowladdu ay soo socdaan, waxa uuna nin isago miis yar ku leh Bakaaraha yiri “Waxaan yaab nagu ah in ciidamadii Dowladda ka cararo”, waxa uuna taasi sabab uga dhigay in kalsoonidii lagu qabi lahaa ciidamada Dowladda laga waayey ayna qasab noqotay in iyaga qudhooda laga cararo.
C/kariin Maxamuud Xasan (Xuuti) oo ah Guddoomiyaha degmada Boondheere ee Magaalada Muqdisho ayaa shalay galab waxaa dhaawac kooxo dabley ah oo soo wareertay.
Goo jooge ayaa sheegay in guddoomiyaha ay xabad ku dhifteen kooxo ka koobneyd saddex nin oo ku hubeysnaa bistoolado, waxa uuna goob jooguhu sidoo kale sheegay in dableydaasi halkaasi ku dishay askarigii waardiyaha qaaska ah u ahaa Guddoomiyaha goobtii ku ruux baxay.
Guddoomiyaha ayaa markii weerarka laga beegsana-yey waxa uu ku sugnaa Garoonka K/cagta lagu cayaaro ee degmada Boondheere, isagoo fiirsanayey cayaar k/cagta ah oo halkaasi ka socotay, markii ay dhamaatay cayaartiina waxaa la sheegay in saddex nin oo ku dhex jirtay dadweynihii cayaarta u soo daawasho tagay in ay guddoomiyaha toogteen, balse ay u suurtageli weysay in ay xabado dhowr ah la helaan kadib markii uu ka dhacay meel jaranjaro ah, sidaasna ay ku dileen ilaaliyihii kadib markii uu isku dayey in uu badbaadiyo Guddoomiyaha, waxaana dhaawaca guddoomiyaha loo qaaday Isbitaalka Keydsanay halkasi oo lagu daaweynayo.
Ma ahan markii ugu horeysay oo weerar lala beegsado mas’uul ka tirsan Dowladda, iyadoo horey loo dilay mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka.
Dowladda Federaalka oo sheegtay in saddex maalmood gudahooda ku soo gebagabeyn doonto Hawlgalada suuqa Bakaaraha
Shir jaraa’id oo uu qabtay taliyaha ciidamada hawlgalada ka wada Bakaaraha Yuusuf Dhuumaalayuu ku sheegay in mudo saddex maalmood gudahood ah lagu soo gebagabeyn doono hawlgalada ay ciidamada Dowladdu ka wadaan Suuqa weyn ee Bakaaraha. Yuusuf Dhiimaal waxa uu sheegay in ganacsatada suuqa weyn ee Bakaaraha iyo Saraakiisha Ciidamada ay kulan wada qaateen, isla markaana ay isla meel dhigeen qodobo dhowr ah, sidoo kalana ganacsatada loo ogolaaday inay guddi ku darsadaan hawlgalada suuqa laga wado si ay ula socdaan.
Taliyaha waxa uu sheegay in suuqa loo qaybiyey afar waaxood, waax walbana ay raaci doonaan rag ka tirsan guddiga ay Ganacsatadu iska soo dhex xushay si ay qayb uga qaataan hawlgalada, isla markaana ay u soo gudbiyaan wixii dhaliilo ah oo ay arkaan inta uu baaritaanku socdo.
Waxaa xaalad xun laga soo sheegayaa Gobalka Sh/dhexe, kadib markii la sheegay in ay wadad isku xirta Muqdisho iyo Sh/dhexe gaar ahaan Magaalada Jowhar ka dilaaceen burcad dhac iyo boob kula kacda gaadiidka isticmaalka wadadaasi.
Qaar ka mid ah Gaadiidleyda iyagu isticmaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar ayaa sheegay in ay dhibaato xoog leh kala kulman burcad wadada isbaarooyin dhigtay, waxa ayna sheegeen gaadiidleydaasi in burcaddaasi ay hantadaadyo u gaysato, isla markaana ay ku xujeeyaan lacago fara badan si ay u gudbaan, haddii ay bixin waayana la xayiro.
Mid ka mid ah Gaadiidlayda oo arrintaasi ka hadlayey a yaa sheegay in Burcaddaasi ay falal kufsi iyo waliba jirdil isugu jira kula kacaan dadweynaha saaran gawaarida, waxa uuna ka codsaday Dowladda Federaalka in ay wax ka qabato falalkaan ay burcaddu ku kacayaan.
Arrimaha burcadeysiga ah ee wadadaasi ku soo kordhay ayaa la sheegay in aysan waxba ka qaban Dowladda Federaalka, iyo waliba maamulka Gobalka J/dhexe, oo lagu soo waramayo in maamulka gudihiisa uu buuq ka jiro, kadib markii ay beelo badan oo dega gobalkaasi qaadaceen dhismaha maamulkaasi.
Wararkii JUly 10,2007
Qaraxyada Isdaba Jooga ah Oo Weli Ka Soconaya Caasimada Muqdisho Xili Ay Ciidamada Dowlada Iyo Kuwa Ethiopia Howl-galo Wadaan.
Qarax gil-giley deegaanada ku dhow dhow xaafada buulo xuubey ayaa xalay ka dhacay deegaanka xaafadaasi buulo xuubey ee degmada madiina qaraxan oo lala beegsaday fariisin ay ciidamada ethiopia ay ku lahaayeen xaafadaasi.
Qaraxan ayaa la sheegay inay ku weerareen kooxo ku hubaysan bambaanooyinka gacanta ciidamada ethiopia ee fariisinka ku leh deegaanka xaafada buulo xuubey islamarkaana ay jaahwareer khal kal cabsiyeed soo wajahday dadka shacabka degan xaafadaasi oo ahaa badaanaba meelaha nabdoon tan xiliyadii dagaaladu ka socdeen caasimada muqdisho.
Lama oga khasaaraha dhabta ah ee uu gaystay Qaraxani loo adeegsaday bam gacmeedka iyadoo ay halkaasi laga maqalayey rasaas goos goos ah oo ay isweydaarsanayaan kooxaha weerarka gaystay iyo ciidamada xukuumada ethiopia .
Qaraxan ayaa kusoo beegmaya xili ay maalinamdii shalay ciidamada huwanta ah ee dowlada KMG ah iyo kuwa Ethiopia baaritaano ka gaysteen isla xaafadaasi buulo xuubey iyo meelo kale iyadoo qaraxani noqonayo kii shanaad ee dhaca maalinmadii shalay oo lagu weeraro ciidamada dowlada iyo kuwa ethiopia .
Si kastaba ha ahaatee ciidamada isku dhafka ah ee dowlada iyo kuwa ethiopia ayaa ku guulaysan la, inay caasimada muqdisho xasdilyaan xili uu shirka dib u heshiisiinta beelaha soomaaliyeedna qarka u soo saaran yahay.
Beesha Mareexaan Oo Qaadacday Kasoo Qayb Galka Shirka Dib-u Heshiisiinta Qaran.
kulamo badan oo ay wada qaateen waxgaradka ,aqoonyahanada iyo isimada beesha sade mareexaan ayaa waxay ku gor feeyeen xaalada siyaasadeed ee maanta dalku marayo taasoo isku afkaar ka noqdeen sidii looga dabaalan lahaa qaab siyaasadeedka murugsan ee maanta dalku ku jiro,islamrkaana kasoo saaray baaq ay kaga soo hor jeedaan shirka dib u heshiisiinta qaran ee lagu wado inuu muqdisho ka dhaco bishan aynu jirno bartamaheeda .
Afhayeenka beesha Sade c/naasir xirsi shaarib ayaa saxaafada u sheegay inay kulankoodii maalmaha qaatay ee ay wada lahaayeen waxgaradka beesha mareexaan ay kasoo saareen inaysan marnaba kasoo qeybgalayn shirka dib u heshiisiinta beelaha soomaaliyeed ee lagu wado in uu ka dhaco 15-ka bishan aynu ku jirno caasimada Muqdisho .
kulankan beesha mareexaan kadib ayaa waxaa shir Jaraa'id uu ku qabtay Hotel Marindium ee magaalada Kismaayo afhayeenka Beesha mareexaan c/naasir shaarib islamrkaana sheegay inaysan ku howlanayn wax shir qaran la yiraahdo iyadoo aysan jirin ergo kasoo uga soo qayb gelaysa beesha sadde magaceeda waanuna ka midaysan nahay ayuu ku sheegay shirkiisa jaraa,id .
Sidoo kale c/naasir shaarib ayaa xusay inaysan beelaha soomaaliyeed dagaalsanayn islamrkaana la doonayo in la wada heshiisiyo siyaasada taasina ay ma jaro habaabinayso dowlada KMG ahi .
" Ma dirisana hogaamiyeyaasha dhaqanka beelaha Somaliyeed, laakiin jahawareerka Somaliya ka taagan waxuu u dhexeeyaa siyaasiyiinta iyo kuwa xukunka jacel, beesheeyaduna diyaar u mahan kulankaasi haddii aan looga hadleyn siyaasdda" ayuu yiri Afhayeenku.
Si kastaba ha ahaatee shirka dib u heshiisiinta beelaha soomaaliyeed ayaa u muuqda mid ay durba hareeyeen jaah wareer iyo kala qaybsan badanaaba beelaha soomaaliyeed ay kasoo hor jeesteen islamrkaana aysan jirin diyaar garoow xoogan oo ka muuqda ergooyinka beelaha soomaaliyeed iyadoo ay ka harsan tahay maalmo oo qura .